08-20-2010 05:00 PM
Rep Power0Re: စာရင်းရေးသွင်းချက်များဆွေးနွေးရန်
M; အင်း အခုတလော အလုပ်တွေများတာ :e ချွေးတောင် ပေါက်ပေါက် ကျတယ် :O အခုလို မူးနေအောင် ဆီစာရင်း ဂါလံတွေကို တွက်နေရလို့ လှုပ်တောင်မလှုပ်နိုင်ဘူး :&#039;( အဲလိုဘဲ အော်ငိုချင်ပေမယ့် ငပေါလို့ ထင်မှာစိုးလို့ မငိုရဲဘူး :-[ အကြောတွေတက်ပီး မျက်လုံးကြီးလဲ စိုက်နေဘီ....
ဒါကြောင့် ပို့စ်ဆက်မရေးနိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ကြပါ .. အဆင်ပြေလို့ အားလပ်သွားရင် ပြန်ရေးပေးပါမယ်.. ဖတ်ရှု့သူများကိုလည်း အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Reply With Quote The Following User Says Thank You to တီလေး For This Useful Post:
Veronica 08-23-2010 03:10 PM
အမ ရဲ့ forum လေးက အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဆက်ရေးပေးပါအုံး။ Reply With Quote 10-13-2010 03:20 PM
ကျွန်တော် အစဉ်လေးစားရပါသော် myanmarengineer မိသားစု မင်္ဂလာပါ။
ကျွန်တော်သိချင်တာကတော့ Quickbooks software ကို စက်ငါလုံးရှဲသုံးချင်တာပါ။
ခုသုံးနေရတာက တစ်လုံးက သုံးရင်တစ်လုံးက ပိတ်ထားမှရပါတယ်။
အဲလိုမဟုတ်ပဲ5လုံးစလုံးသုံးလိုရအောင်လို လုပ်ချင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာလေသိပါရစေ။
ကျွန်တော် အစဉ်လေးစားရပါသော် myanmarengineer မိသားစုတွေ ကျန်းမာချမ်းသာကျပါစေ။
Reply With Quote 10-13-2010 08:33 PM
Location Pyay, myanmar
Posts 74	Thanks 202
Thanked 164 Times in 46 Posts
Rep Power0Re: ပြန်စာ -> စာရင်းရေးသွင်းချက်များဆွေးနွေးရန်
[quote author=တီလေး link=topic=7583.msg53830#msg53830 date=1275187956]
ဒီ Post ကို ၀င်ကြည့်သူများ ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကွန်နက်ရှင်က တီလေးတို့ရုံးမှာ အရမ်းကျနေလို့ Post တင်ရတာအဆင်မပြေဘူး ဖြစ်နေတယ် ..
အခုတောင် သင်တန်းတက်နေရင်းနဲ့ :4: ခိုးပြီး တင်ရတာ အဆင်ပြေရင်တော့ အသစ်တင်ပေးစရာတွေရှိပါတယ် သည်းခံပြီး စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ စောင့်ပေးနော်
I amaMyanmar Engineer www.kotinminhtoo.blogspot.com လုပ်သင့်တာတွေလုပ် နိုင်သလောက် လုပ်သွားမယ်... Reply With Quote 01-24-2011 05:38 PM
Rep Power0တီလေးရေ ...
ကျွန်တော်က myanmarengineer မိသားစုကို ဒီနေ့မှ ၀င်လာတဲ့သူပါ ...
စာရင်းကိုင်အလုပ် လုပ်နေပါတယ် ... စနစ်တကျတော့မရှိဘူးပေါ့ အသေမှတ်ထားတာလေးကတော့ ( စားရင် Dr .. ယိုရင် Cr ) :P
စိတ်ဝင်စားစွာနဲ့ စောင့်မျှော်ပညာယူနေပါတယ် ... Reply With Quote 12-01-2014 11:00 PM
Rep Power0Budget Line ဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျ ဥပမာ travelling allowance စသဖြင့် category ဘယ်လိုခွဲပြီးဆွဲလဲပေါ့
Reply With Quote 06-25-2015 10:58 PM
Rep Power0File - Switch to Multi-User Mode File - Utilities - Open Hosting Multi-USer Access..
Cadence IC6( Simulation ) အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှ ဆွေးနွေးရန်
By htetlinnaung in forum အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ
Last Post: 02-25-2011, 07:37 PM
အဝေးထိန်း remote control system များဆွေးနွေးလိုသည်။
By mg kyi thar in forum အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ
Last Post: 01-12-2011, 08:47 PM
By phoelapyae in forum MEF အမှတ်တရ လှုပ်ရှားမှုများ
All times are GMT +6.5. The time now is 05:08 PM.